တော်တန်ရုံ သတိမထားမိနိုင်လောက်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အမှား ၇ ချက် - ONE DAILY MEDIA
ကျော်ကြားသော အနုပညာလက်ရာများကို ဖန်တီးပြီးနောက် နှစ်ရာနှင့်ချီအကြာမှာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ပြန်လည်ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် ကြိုးပမ်းနေကြပြီး မည်သည့်အသေးစိတ်အစီအစဥ်နှင့် မည်သည့်အရာများ မတော်တဆဖြစ်ခဲ့သည်ကို မှန်းဆရခက်ပါတယ်။ ဤလက်ရာများကို ကြည့်ရှုခံစားပြီး Botticelli ၏ပန်းချီကားများမှ အချိုးမညီသောခြေထောက်များ သို့မဟုတ် “David” ပန်းပုရုပ်တု၏ မျက်လုံးလွဲခြင်းကဲ့သို့သော အမှားများဟု ယူဆနိုင်သည့်အရာများကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
ပန်းချီ၊ ဗိသုကာပညာနှင့် ပန်းပုပညာရှင်ကြီးများ၏ လက်ရာများတွင် ဝှက်ထားသော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများအကြောင်း သင့်အား ပြောပြမည်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Jean Ingres’ “Portrait of Comtesse d’Haussonville”
“Comtesse d’Haussonville” ၏ပုံတူ ညာဘက်လက်သည် ပုံပျက်နေပါတယ် ။ လက်ဖျံသည် ဖြစ်သင့်သည်ထက် ပိုကြီးနေပုံရပြီး တံတောင်ဆစ်ဟာ အလွန်ဝေးကွာနေကာလက်ချောင်းကွေးပုံမှာ သဘာဝမကျပေ။ ထို့အပြင် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမှာ မရှိသင့်သော်လည်း မှန်ထဲတွင် ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည့် မော်ဒယ်၏ လက်ချောင်းများကို သူမလည်ပင်းအနားတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Jean Ingres ၏လက်ရာများဟာ အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ အချို့ပုံများတွင် ပန်းချီဆရာသည် မှန်ကန်သော အချိုးအစားများ မဟုတ်သော်လည်း အချို့မှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး လက်တွေ့ဆန်ပါတယ်။ သူ၏လက်ရာများတွင် သဘာဝ၀ါဒကို ဝေဖန်သူများက အဆင့်မမှီဟု ခေါ်ဆိုကြသော်လည်း ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဟာ အမှန်တကယ်တော့ ပန်းချီဆရာကြီး၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၂) Théodore Géricault’s “The 1821 Derby at Epsom”
ဒုတိယပုံသည် Eadweard Muybridge ၏ “The Horse in Motion”လက်ရာကို ပြသထားပါတယ်။ Géricault ၏ ပန်းချီပေါ်တွင် ပုံဖော်ထားသည့် မြင်းပြေးပုံဟာ လက်တွေ့နှင့် မတူနိုင်ကြောင်း ဓာတ်ပုံဆရာက သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
“The 1821 Derby at Epsom” ပန်းချီမှ မြင်း၏ခြေထောက် ပုံစံများဟာ တွင် မှားယွင်းနေပါတယ်။ အရှေ့နှင့် နောက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကို ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ဆန့်ထွက်ကာ မပြေးလွှားနိုင်သော တိရစ္ဆာန်များအကြောင်းကို ဓာတ်ပုံဆရာ Eadweard Muybridge က နှစ် 50 အကြာတွင်မှ ပန်းချီဆရာ၏ အမှားကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ၊ မြင်းများဟာ ခြေထောက် ၄ ချောင်းလုံးကို မြေပြင်ပေါ်မှ တပြိုင်နက် ဆန့်ထုတ်သော်လည်း၊ ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများအရ ကွဲပြားပြီး ထိုအခိုက်အတန့်ဟာ တစ်စက္ကန့်ထက်နည်းပါတယ်။
(၃) Michelangelo Buonarroti’s “Pietà”
The Pity” သို့မဟုတ် “Pietà” သည် Michelangelo လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသောအလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ပန်းပုဟာသရုပ်ဖော်လိုသည့် အခြေအနေ၏ ခံစားချက်ကို ဖန်တီးပေးပြီး လူများက ၎င်း၏ သေးငယ်သော မှားယွင်းမှုများကို သတိမထားမိဘဲ အလွန်လှပမှုကိုပဲ သတိထားမိပါတယ် ။ သို့သော် အလုပ်ကို ဟန်ချက်ညီစေရန် မာရိနှင့် ယေရှု၏ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို သေချာလေ့လာကြည့်ပါ။သူမ၏ နုနယ်သော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို အဝတ်အထည်များဖြင့် ဆွဲဆန့်ထားပြီး သူမ၏ လက်များ၊ ခြေထောက်များနှင့် ပခုံးများသည် ခရစ်တော်ထက် ပိုကြီးပုံဖြစ်နေပါတယ်။
(၄) Canterbury Cathedral
Canterbury Cathedral သည် Great Britain ၏ ပထမဆုံးအင်္ဂလီကန်ဘုရားကျောင်းဖြစ်ပြီး အလယ်ခေတ် Gothic ဗိသုကာလက်ရာများ၏ တောက်ပသော ဥပမာတစ်ခုပါပဲ။ သို့သော်လည်း ဤအသင်းတော်တွင် မှားယွင်းမှုများ ရှိနေပါသည်။ အထက်ဓာတ်ပုံတွင်၊ triforium ၏ဒြပ်စင်သည် အချိုးမညီကြောင်း သင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
(၅) Andrea Mantegna’s “Lamentation of Christ”
Mantegna ၏ လက်ရာတွင် မြင်သာသောရွဲ့‌ေစာင်း‌ နေသည့် အချိုးအစားများရှိ‌ပါတယ်။ခရစ်တော်တွင် ဦးခေါင်းကြီးကြီး၊ လက်တံရှည်နှင့် ခြေတိုများရှိ နေပါတယ်။ ပန်းချီဆရာက ခြေဖဝါးများကို သေးငယ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ထင်ရပါတယ်။ ကံကောင်းတာက လူအများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုဟာ ရင်ဘတ်ပေါ်တွင် ရောက်နေကြတာပါ။
(၆) Jan Gossaert’s (a.k.a. Jan Mabuse) “Portrait ofaMerchant” and “Self Portrait”
Mabuse ၏ ပန်းချီကားအချို့တွင် လက်ချောင်းများသည် ရှည်လွန်းကာ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပုံစံဖြင့် ကွေးညွှတ်နေပုံကို ပြသထားသော်လည်း ကျန်ပုံအစိတ်အပိုင်းများ၏ လက်တွေ့ဆန်မှုက ပန်းချီကို ပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်မှု ကောင်းနေစေပါတယ်။ မလှုပ်ရှားဘဲ အချိန်အကြာကြီး ကိုယ်ဟန်ပြရန် ခက်ခဲသောကြောင့် ပန်းချီဆရာ၏ လက်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ ဖန်တီးစဉ်အတွင်း အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြပြီး အမှားအယွင်းများကို ရှောင်လွှဲ၍မရသည်က အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
(၇) Michelangelo Buonarroti’s “David”
David” ကို အမျိုးသားအလှတရား၏စံပြအဖြစ် ၅ ရာစုနှစ်ကတည်းက သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သင်သည် ရုပ်တု၏မျက်လုံးများကို ညာဘက်မှ ကြည့်လျှင် ၎င်းတို့ သွေဖည်သွားသည်ကို သတိပြုမိနိုင်ပါတယ်။ ညာဘက်က အနည်းငယ်အပေါ်သို့ကြည့်နေပြီး ဘယ်ဘက်မျက်လုံးသည် ရှေ့တည့်တည့်ကြည့်နေပါတယ် ။ Michelangelo ကဲ့သို့ ထူးချွန်သော ပန်းပုဆရာ၏ ၁၆
ပေကျော် မြင့်သောရုပ်တုဟာအခြားရှူထောင့်များအားလုံး ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့် ၎င်းကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဟု ယူဆမိပါတယ်။ သုတေသီတစ်ဦး ပြောသည်ကတော့ မည်သည့် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်မဆို David ဟာ ထိုကဲ့သို့သော ဧရာမ ရုပ်တုကို မျက်စိချို့ယွင်းချက်ဖြင့် လုပ်နိုင်မည်ကို ယုံမည်မဟုတ်ပေ။
ကမ္ဘာကျော် လက်ရာများအနက် ဤကဲ့သို့ အခြားမှားယွင်းမှုများကို သင်သတိပြုမိဖူးပါသလား???